Qalabka tamarta keydinta ee Shiinaha Energy 12V 10Ah LiFePO4 baakad batari leh BMS soo saaraha iyo alaab-qeybiye | LIAO
Kaydinta tamarta naqshadeynta guri fidsan 12V 10Ah LiFePO4 baakad batari leh BMS
1. Kiiska birta ah naqshadeynta fidsan 12V 12Ah LiFePO4 baakid batari si loogu kaydiyo arjiga korontada
Qaabka Lambar CGS-F1210N
Awoodda magaca 10Ah
Ugu badnaan lacag joogto ah 5A
Ugu badnaan dheecaan joogto ah 5A
Cabbir 275mm * 167.5mm * 20mm
Codsiga Awoodda dib-u-soo-kabashada, tamarta keydinta tamarta, iwm.
5. Tamarta cagaaran: Ma laha wasakhaynta deegaanka.
Hordhac Codsiga Awoodda
Kaydinta korontada ee keydka waxay xaqiijin kartaa in korontada la bixiyo haddii ay dhacdo cilladaha caadiga ah sida koronto la'aan ama marka korantada korantada ay dhaafto xadka badbaadada ee la cayimay, si aad usii wadato isticmaalka kombiyuutarka si caadi ah. Xaaladahaas oo kale, waxaad ka wareegi kartaa korontada aasaasiga ah una wareejin kartaa quwadda korontada si aad u awood u siiso kumbuyuutarka iyo aaladaha durugsan ee isla markiiba ku xiran batteriga. Nidaamkani wax dhib ah u keeni maayo isticmaalkaaga.
Hawsha kale ee ugu muhiimsan ee korontada dib u soo celinta waa inay ka ilaaliso kumbuyuutarkaaga iyo aaladahaaga kororka fiilooyinka korantada iyo khadadka xogta. Kor u kaca wuxuu dhaawici karaa qalabka kujira qalabka wuxuuna baabi’inayaa xogtaada keydsan, sida muusikada, feylasha ganacsiga ama sawirada.
Intaa waxaa dheer, faa'iido kale oo weyn oo ah isticmaalka awoodda keydka ayaa ah inaan ku rakibno kombiyuutarka kumbuyuutarka kumbuyuutarka kumbuyuutarka, sida hagaajinta nidaamka si deggan loo xiro iyada oo aan la helin shaqaale gaar ah, diiwaangelinta dhibaatooyinka korantada, iyo daminta dhawaaqa digniinta habeenkii.
Doorka awoodda keydinta
• In la hagaajiyo dhammaan noocyada dhibaatooyinka korantada
• Ka takhalus faragelinta ay keeneen dhibaatooyinka korontada
• Ku keydi xogta qiimaha badan diskiga adag
• Ka-hortagga luminta xogta qiimaha leh ee korantada awgood, oo ay ku jiraan sawirro dijitaal ah, feylasha qaababka MPEG, maktabadaha muusigga, iwm.
• Waqti badbaadi inaad dib u dhigto DVR, dib u bilow kombiyuutarka warbaahinta, iwm.
• Hubso tayada sawirka inta lagu jiro korontada iyo xilliyada koontaroolka korantada
• Hubso helitaanka ugu sarreeya ee VoIP
Hore: LiFePO4 module batari (cell 16 x 10Ah)
Xiga: Iibinta kulul kiishka macdan 488 40Ah lithium batari nidaamka kaydinta tamarta